विप्लवका सगरमाथा ब्यूरो इन्चार्ज निलम्वित ! | Safal Khabar
विप्लवका सगरमाथा ब्यूरो इन्चार्ज निलम्वित !
ब्यूरो इन्चार्जकै कारवाही पार्टीभित्रै गुपचुप, सांस्कृतिक विचलनको आरोपमा कारवाही
मंगलबार, ०३ भदौ २०७६, ०७ : ५५
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको सगरमाथा ब्यूरो इन्चार्ज निलम्बनमा परेका छन् । एक उच्च स्रोतले सफलखबरलाई दिएको जानकारी अनुसार, उनलाई पार्टीले निलम्बन गरेको हो ।
उनलाई पूर्वी कमाण्ड इन्चार्ज समेत रहेका स्थायी समिति सदस्य सन्तोष बुढामगर (विषम)ले निलम्बन गरेका हुन् । पूर्वमा विप्लव पार्टीमा नेताहरुको खडेरी नै परेपछि अहिले पश्चिमका नेता कार्यकर्तालाई पूर्वमा परिचालनको नीति पनि उक्त पार्टीले बनाएको छ ।
काठमाडौं पूर्वमा विप्लव पार्टीको केन्द्रीय समितिमा नेताहरु छदैछैनन् भन्दा पनि हुने अवस्था आएको उक्त पार्टीका एक नेताले बताए । मधेसका देवनारायण यादव मात्र अब पूर्वका पार्टीमा केन्द्रीय समितिमा छन् । अन्य सबै नेताहरु भने पश्चिमकै देखिएका छन् ।